October 6, 2021 – Shwe Myanmar
သားဖွဈသူ ရမှေနျ အကွောငျး မကျတဲ့ အိမျမကျအကွောငျး ​ဝမျးနညျးစှာပွောပွလာတဲ့ မိခငျ ဒျေါခငျမွတျမှနျ
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ Idiots လို့ပြော လိုက်တာနဲ့ သီချင်းေ ကာင်းတွေနဲ့ အရွယ်အတ န်းအစား မရွေးတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေကြား ရေပန်းစားအော င်မြင်ေ ကျာ်ကြားတဲ့ Band အဖြစ် အားလုံး ကသိကြ ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Band ရဲ့ အဆိုေ တ်ာဖြစ်တဲ့ ရေမွန် ကတော့ လူကြီးလူင ယ်မရွေး ယောကျာ်းမိန်းမမရွေး ပရိတ်သတ်များစွာက ချစ်ခင်အားေ ပးကြတဲ့ နိုင်ငံကျော်တေး သံရှင် ဖြစ်ပါတယ်။ရေမွန်ဟာ တေးသီချင်း များရေးသားခြ င်း၊တေးသီ ချင်းများ သီဆိုခြင်း အစရှိတဲ့ အနု
ပညာလု ပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ သီချင်း တချို့ဖြစ်တဲ့ “တခန်းရပ်၊ဆုလာဘ်၊ဘာလိုနေသေးလဲ၊ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့ချစ်သူ၊ချန်ခဲ့” အစရှိတဲ့သီချ င်းတွေဟာလ ည်းပရိတ် သတ်ကြား ရေပန်းစားေ အာင်မြင်ခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိတ်သ တ်အချစ်တော် ကိုရေမွန် ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့(၃)လကျော်က နာမကျန်းဖြစ်ကာ ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ မိသားစုဝ င်များနှင့်တစ်နို င်ငံလုံးမှ ပရိတ်သ တ်များ အားလုံးက အရမ်းကိုနြှေ မာတသဖြစ် ခဲ့ရပါတယ်။ယမန်နေ့
အာက်တိုဘာ(၅)ရ က်က သူ့မိခင် အန်တီခင်မြတ်မွန်ကလည်း ရေမွန့်ကို အိမ်မက်မက်ကြောင်းကို ဝမ်းနည်းစွာပြော ပလာပါတယ်။ သူမဟာ သားဖြစ်သူကိုအရမ်း လွမ်းဆွတ် သတိရြေ ကာင်း၊ သားဖြစ်သူ ကိုတွတ်ပီတစ်ယောက် ရောက်ရာဘဝ မှာအဆင်ြေ ပနေရဲ့လားစိတ် ပူကြောင်းကိုလ ည်းဖော်ပြရေး သားထားပါေ
သးတယ်။ကိုရေမွန် ဟာ ကောင်းရာမွန်ရာေ ရာက်မှာဖြစ်လို့ တီတီခင်မြတ်မွန်လည်း စိတ်သောကေ တွအမြန်ဆုံးပြေပျောက်နိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်။crd
ပရိတျသတျကွီးရေ Idiots လို့ပွော လိုကျတာနဲ့ သီခငျြးေ ကာငျးတှနေဲ့ အရှယျအတ နျးအစား မရှေးတဲ့ ပရိတျသတျတှကွေား ရပေနျးစားအော ငျမွငျေ ကျြာကွားတဲ့ Band အဖွဈ အားလုံး ကသိကွ ပါတယျ။အထူးသဖွငျ့ Band ရဲ့ အဆိုေ တျာဖွဈတဲ့ ရမှေနျ ကတော့ လူကွီးလူင ယျမရှေး ယောကျြားမိနျးမမရှေး ပရိတျသတျမြားစှာက ခဈြခငျအားေ ပးကွတဲ့ နိုငျငံကြျောတေး သံရှငျ ဖွဈပါတယျ။ရမှေနျဟာ တေးသီခငျြး မြားရေးသားခွ ငျး၊တေးသီ ခငျြးမြား သီဆိုခွငျး
အစရှိတဲ့ အနုပညာလု ပျငနျးမြားကို လုပျကိုငျခဲ့ တာဖွဈပါတယျ။ သူ့ရဲ့ သီခငျြး တခြို့ဖွဈတဲ့ “တခနျးရပျ၊ဆုလာဘျ၊ဘာလိုနသေေးလဲ၊ဝမျးနညျးတတျတဲ့ခဈြသူ၊ခနျြခဲ့” အစရှိတဲ့သီခြ ငျးတှဟောလ ညျးပရိတျ သတျကွား ရပေနျးစားေ အာငျမွငျခဲ့တဲ့ သီခငျြးတှပေဲဖွဈပါတယျ။ပရိတျသ တျအခဈြတျော ကိုရမှေနျ ဟာ လှနျခဲ့တဲ့(၃)လကြျောက နာမကနျြးဖွဈကာ ကှယျလှနျခဲ့ပါတယျ။သူ့ရဲ့ မိသားစုဝ ငျမြားနှငျ့တဈနို ငျငံလုံးမှ ပရိတျသ တျမြား အားလုံးက အရမျးကိုနွှေ မာ
တသဖွဈ ခဲ့ရပါတယျ။ယမနျနေ့ အောကျတိုဘာ(၅)ရ ကျက သူ့မိခငျ အနျတီခငျမွတျမှနျကလညျး ရမှေနျ့ကို အိမျမကျမကျကွောငျးကို ဝမျးနညျးစှာပွော ပလာပါတယျ။ သူမဟာ သားဖွဈသူကိုအရမျး လှမျးဆှတျ သတိရွေ ကာငျး၊ သားဖွဈသူ ကိုတှတျပီတဈယောကျ ရောကျရာဘဝ မှာအဆငျွေ ပနရေဲ့လားစိတျ
ပူကွောငျးကိုလ ညျးဖျောပွရေး သားထားပါေ သးတယျ။ကိုရမှေနျ ဟာ ကောငျးရာမှနျရာေ ရာကျမှာဖွဈလို့ တီတီခငျမွတျမှနျလညျး စိတျသောကေ တှအမွနျဆုံးပွပြေောကျနိုငျပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျရပါတယျ။crd
ကာကှယျဆေးတော့ မထိုး ခငျြဘူး ကိုဗဈ ဖွဈရငျ အဖွဈခံ လိုကျမယျ ဆို တဲ့ ရှအေိမျစညျ
သရုပ်ေ ဆာင် မော်ဒယ်လ် ရွှေအိမ်စ ည် ကတော့ လက် ရှိ မှာ ကိုယ်ပိုင် website တစ်ခု ပြုလုပ်လျှက်ပြီး သူမအနေနဲ့ နိုင် ငံရပ်ခြားမှာ ထိုးဖော က်ဖို့အတွ က်လည်း ပြင်ဆင်နေတ ယ်လို့ သိရပါတယ်။ “ လောလောဆယ် modelling နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ website တစ်ခု လုပ်နေတယ်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ လန်ဒ န်ကို ပြန်သွား ပြီတော့ အိမ်စည့် ရဲ့ လက်ရှိ မော်ဒယ် လ် အလုပ်ကိုရော သရုပ်ဆောင်ပိုင်းကိုပါ တိုးချဲ့ချင် တာ။ မြန်မာနိင်ငံ မှာတော့ အိမ်စည်က အတိုင်းအ တာ
တစ်ခုထိ လုပ်ပြခဲ့ပြီးပြီလို့ ထင်တယ်။ လန်ဒန်ကကျတော့ ကိုယ်ြ ကီးပြင်းခဲ့တဲ့ နေရာ လည်းဖြစ်တော့ လုပ်ချင် တယ်။ ဟိုမှာလည်း အခွင့်အလမ်း များတယ်။ နှစ်နိုင်ငံ ဟိုဘက်လည်း လုပ် ၊ ဒီဘက်လည်း လုပ် အဲ့ဒီလို ဆိုတော့ မကောင်းဘူးလားပေါ့” လို့ဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင် ကိုဗစ်ကာ ကွယ်ဆေး နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့လည်း ရွှေအိမ်စည်က “ ကာကွယ်ဆေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ ဘာပြောလို့ပြောရ မှန်းတော င်မသိဘူး။ ကာကွယ်ဆေး မပေါ်ခင်ကလည်း အိမ်စည်က အလုပ်
နဲ့ ပတ်သက်ပြီး နေ့တိုင်း သွားနေ လာနေရတာပဲ။ကိုယ့်ဘက်ကလည်း ဆင်တော့ ဆင်ခြင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လည်း ဖြစ်မှလည်း ဖြစ်တော့ကွာပေါ့။ ဒီအတိုင်းချည်းပဲ ဘာမှမလု ပ်ပဲနေရ သွားရအောင်လည်း အိမ်စည့်ကို ဘယ်သူကတ င်ကျွေးထားရမှာလဲ။အိမ့်စည် ကျတော့ တစ်ယောက် တည်းနေတဲ့ အခါကျတော့ သူများတွေ လို ကိုယ့်ဆီကနေ မိဘကို ပြန်ကူးမှာတွေ ဘာတွေ လည်း စိတ်ပူစရာမ ရှိဘူးပေါ့။ အဲ့ဒီလို ရှိတဲ့သူတွေက ဒါ သူတို့ ကိစ္စပေါ့။ အဲ့ဒီတော့ ကာကွယ်ေ
ဆးတွေ ဘာတွေ မျှော်မနေဘူး။ ဖြစ်လာရင်လည်း ကွာ ရန်ဝင်းလိုက်မယ်။ ဖြစ်ပစေ အဖြစ်ခံ လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်မျိုး အိမ်စည့်မှာ ရှိတယ်။ပြီးတော့ ကာကွယ်ဆေးက ကိုဗစ်ကို ကာကွ ယ်ပေးနိုင်တ ယ်ဆိုပေမယ့် ကိုဗစ်က ထပ်ဖြစ်လာတဲ့ ရောဂါအပွားတွေကို အကာအ ကွယ် မပေးနိုင်ဘူးလေ။ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း မကာကွယ်ပေးနိုင် ရင်တော့ ကာကွယ်ေ ဆးမှ မဟုတ်တာ။ အိမ်စည်က ဆရာဝန် မဟုတ်လို့ သေချာ မသိပေ မယ့် ဘေးထွက်ဆိုး ကျိုးတော့ ရှိမှာပဲလေ။အဲ့ဒီ ဘေးထွ
က် ဆိုးကျိုးတွေကို မခံစားချင်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ အိမ်စ ည်ကတော့ ကာကွယ်ဆေးကို မထိုးဘူး။ အဲ့ဒီလိုပြောလို့ ဝိုးတွေ ဝါးတွေတော့ လာ မလုပ်နဲ့။ အိမ်စည်က ကိုယ့် တစ်ကိုယ်ရ ည်စာအတွက်ပြောတာ” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။crd
တခါတုန်းက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တယောက်ဟာ လမ်းဘေးမှာ ခဲတံလေးတွေ ရောင်းပြီး ငွေတောင်းနေတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ ခွက်ထဲကို ပိုက်ဆံတစ်ဒေါ်လာ ထည့်လိုက်ပါတယ် ။ ပြီးတော့ သုတ်သီးသုတ်ပျာနဲ့ ရထားပေါ် ကို ပြေးတက်သွား ခဲ့ပါတယ် ။နောက်မှ သတိရပြီး ရထားပေါ်က ပြန်ဆင်းလာကာ စောစောက သူငွေထည့်ပေးခဲ့တဲ့ သူဆီ ပြန်သွားပြီး ခွက်ထဲက ခဲတံတစ်ချောင်းကို နှိုက်ယူလိုက် ပါတယ် ။ ပြီးတော့ သူက အလောတကြီး ဖြစ်နေလို့ ငွေထည့်ပြီး ခဲတံယူဖို့
မ့သွားတယ်လို့ ပြုံးပြပြီး ပြောပါတယ် ။ နောက်ပြီး သူက ငွေတောင်းနေသူကို ပြောတယ် ။” ခင်ဗျားလည်း ကျွန်တော့်လို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တစ်ယောက်ပဲလေ ။ ခင်ဗျားမှာ ရောင်းစရာတွေ ရှိနေပြီး ဒါတွေကို သင့်တင့်မျှတတဲ့ ဈေးနှုန်းသတ် မှတ်ထားတာပဲ မဟုတ်လား ။ ကြိုးစားပါ ” လို့ ပြောပြီး ရထားပေါ် တက်သွားခဲ့ပါတယ် ။အချိန်တခု ကြာတဲ့အခါ လူမှုရေး ပွဲလမ်းသဘင် တစ်ခုမှာ သားသားနားနား ဝတ်စားထားတဲ့ သူတယောက်က စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးထံ
လာပြီး သူ့ကိုယ်သူ မိတ်ဆက်ပါတယ် ။” ခင်ဗျားကတော့ ကျွန်တော့်ကို မှတ်မိမှာ မဟုတ်ပေမယ့်.. ခင်ဗျားကို ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှာ မေ့မှာမဟုတ်ပါဘူး ။ ခင်ဗျားနဲ့ မတွေ့မီ အချိန်အထိ ကျွန်တော်ဟာ ခဲတံလေးတွေ ရောင်းတဲ့ သူတောင်းစား တယောက်ပါပဲ ။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ကို စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ပဲ လို့ ပြောသွားခဲ့တဲ့ အချိန်က စပြီး၊ ကျွန်တော်ဟာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်သွားတယ် ” လို့ ပြောခဲ့ပါတယ် ။သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ သူတောင်းစားပဲ လို့
တွးတောထားတဲ့ အမြင်ကနေ ရုတ်တရက် စကားတခွန်းကြောင့် သူ့အတွေးတွေ ပြောင်းသွားတယ် ။ သူ့ကိုယ်သူ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး သူဟာ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တယောက်ပဲ လို့ တွေးတော ခဲ့တယ် ။ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တယောက်လို စတင်ပီး ကျင့်သုံး ပြုမူ ခဲ့တယ် ။ သူအတွေးတွေဟာ သူ့ဘဝရဲ့ ပဲ့တင်သံတွေ ပါပဲ ။မိမိအတွေး ပုံရိပ်ထဲမှာ ” ငါဟာ သူတောင်းစားပဲ ” လို့ တွေးပါ များရင် ” ငါဟာ သူတောင်းစားပဲ ” ဆိုတဲ့အသံသာ အထပ်ထပ် ပြန်ကြားနေရ မှာပါ ။
” ငါဟာ လုပ်ငန်းရှင်ပဲ ” လို့ တွေးလိုက်တာနဲ့ ” ငါဟာ လုပ်ငန်းရှင်ပဲ ” ဆိုတဲ့ အတွေး ပဲ့တင်သံ ပြန်လာမှာ အသေအချာ ပါပဲ ။နောက်ပြီး ဒီပုံပြင်လေးထဲက စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးလို သင်လည်း သူတပါးကို အကောင်းမြင်ပြီး စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမယ့် စကားလုံးတွေနဲ့ ကူညီနိုင် ပါတယ် ။လူတွေရဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ထဲမှာ ပါရမီတွေ ၊ အစွမ်းအစတွေ ကိုယ်စီ ရှိနေကြပါတယ် ။ ဒါတွေကို သင်က နှိုးဆွပေးလိုက်ရုံနဲ့ သူ့ကိုယ်ထဲက အစွမ်းအစတွေဟာ ငြိမ်မနေနိုင်ပဲ စွမ်းအားတွေအဖြစ်
ထွက်ပေါ်ကာ သူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကို ပြောင်းလဲသွားစေ နိုင်ပါသေးတယ် ။ဒီလိုနည်းနဲ့ သင်က လူတွေရဲ့ ဘဝတွေကို တိုးတက် အောင်မြင်သွားအောင် စေတနာ စိတ်ဓာတ် အပြည့်နဲ့ ကူညီပေးမယ် ဆိုရင် သင့်ကူညီမှုရဲ့ ပဲ့တင်သံတွေဟာ သင့်ထံကို ပြန်လာမှာ မလွဲမသွေ ပါပဲ ။တခြားသူတွေရဲ့ဘဝကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းအားဖြင့် သင်ကိုယ်တိုင်လည်း သေချာပေါက် တိုးတက် အောင်မြင်လာမှာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာ အာမခံပါတယ် ။သင်ပြုတဲ့ကံ ပဲ့တင်သံ သင့်ထံ ပြန်လာမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။Crd
“ဘိလပျမွေ အတုနဲ့ အစဈ ဘယျလိုခှဲခွားမလဲ”
လုပ်ငန်းခွင် ဝင်နေကြသော အင်ဂျင်နီယာများ၊ ကန်ထရိုက်တာများ၊ ပန်းရံသမားများ စသဖြင့်
ဘိလပ်မြေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေသူအားလုံး သိစေဖို့အတွက် ဘိလပ်မြေ အတုအစစ် ခွဲခြားနည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
၁။ ဘိလပ်မြေအမှုန့် အနည်းငယ်ကို ရေဖျော်ပြီး အလုံးကလေး(၂)လုံး၊ (၃)လုံးခန့်လုံးပြီး ခဏအခြောက်ခံထားပါ။
(၂)မိနစ်ခန့် ကြာသော် ထိုဘိလပ်မြေလုံးများအား လက်ဖြင့်ဖိခြင်း၊ ဖျစ်ကြည့်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါ။
လုံးဝ ကွဲအက်မသွားဘဲ သံခဲ၊ ကျောက်ခဲကဲ့သို့ မာနေလျှင် ဘိလပ်မြေ စစ်သည်။ ကွဲအက်သွားပါကဘိလပ်မြေ အတုဖြစ်ပါသည်။
၂။ ဘိလပ်မြေအမှုန့်အနည်းငယ်ပေါ်သို့ သံပရာရည်(သို့) ရှောက်ရည် အနည်းငယ် ညှစ်ကြည့်ပါ။ ပွက်ပွက်ဆူလာလျှင် ဘိလပ်မြေအစစ်ဖြစ်ပြီး၊ လုံးဝဆူပွက်မလာပါက အတုဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။
(အထက်ပါ နည်းများမှာ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ အမှတ်(၁)၊ သရက်မြို့၊ အမျိုးအစား စစ်ဆေးရေးဌာနမှ ဦးအေးကျော်၏ ပြောပြချက်ဖြစ်ပါသည်။)
လုပျငနျးခှငျ ဝငျနကွေသော အငျဂငျြနီယာမြား၊ ကနျထရိုကျတာမြား၊ ပနျးရံသမားမြား စသဖွငျ့
ဘိလပျမွနေဲ့ ပတျသကျဆကျနှယျနသေူအားလုံး သိစဖေို့အတှကျ ဘိလပျမွေ အတုအစဈ ခှဲခွားနညျးကို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ ခငျဗြာ။
၁။ ဘိလပျမွအေမှုနျ့ အနညျးငယျကို ရဖြေျောပွီး အလုံးကလေး(၂)လုံး၊ (၃)လုံးခနျ့လုံးပွီး ခဏအခွောကျခံထားပါ။
(၂)မိနဈခနျ့ ကွာသျော ထိုဘိလပျမွလေုံးမြားအား လကျဖွငျ့ဖိခွငျး၊ ဖဈြကွညျ့ခွငျးမြား ပွုလုပျပါ။
လုံးဝ ကှဲအကျမသှားဘဲ သံခဲ၊ ကြောကျခဲကဲ့သို့ မာနလြှေငျ ဘိလပျမွေ စဈသညျ။ ကှဲအကျသှားပါကဘိလပျမွေ အတုဖွဈပါသညျ။
၂။ ဘိလပျမွအေမှုနျ့အနညျးငယျပျေါသို့ သံပရာရညျ(သို့) ရှောကျရညျ အနညျးငယျ ညှဈကွညျ့ပါ။ ပှကျပှကျဆူလာလြှငျ ဘိလပျမွအေစဈဖွဈပွီး၊ လုံးဝဆူပှကျမလာပါက အတုဖွဈကွောငျး သိရှိနိုငျပါသညျ။
(အထကျပါ နညျးမြားမှာ ဘိလပျမွစေကျရုံ အမှတျ(၁)၊ သရကျမွို့၊ အမြိုးအစား စဈဆေးရေးဌာနမှ ဦးအေးကြျော၏ ပွောပွခကျြဖွဈပါသညျ။)
လူတစ်ယော က်သည် ကံကောင်း ချင်လာပြီဆိုလြှင် စိတ်တည် ငြိမ်လာခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု ကင်းကာ စိတ်ျမားကြည်လင်လန်းဆန်းလာခြင်းစသော လက္ခဏာများ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိပါသည် …။၎င်းစိတ်ကို ယေဘုယအြားဖြင့် ကောင်းစိတ်ဟု သတ်မွတ်နိုင်ပါသည် …။
ထိုစိတ်မျိုး ဝင်လာလြှင် ‘ငါတော့ ကံကောင်းတော့မယ်၊ ဒီစိတ်ဟာ ကောင်း ကံပြုလုပ်ဖြစ်ဖို့ အကြောင်းခံစိတ်ပေပဲ’ ဟု သဘောထားကာ ထို စိတ်ကို ပျောက်ပျက်မသွားရေအာင် ထိန်းထားပြီး ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ယူရမည် ဖြစ်သည် …။
ထို့အပြင် အျမားဆုံး ပြုလုပ်ဖြစ်လေ့ ရွိသည့် လေ့ကျင့်နေစရာ အထူး မလိုသော သမားရိုးကြ မေကာင်းကံဘက်သို့ ပြန်ပြောင်း နောက်ကြောင်းပြန်မလှည့်မိစေရန်လည်း အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
လှူချင်တန်းချင်စိတ်ပေါက်လာလျှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ဒီကံလေး အထမြောက်အောင် ငါ လှူပေးဦးမှ’၊ သီလေဆာက်တည်ချင်စိတ် ပေါက် လာလျှင် ‘ငါ ကံကောင်း လာပြီ၊ သီလလေး ဆောက်တည်ပြီး နေဦးမှ’၊
ဘုရားရွိခိုးချင်စိတ် ပေါက်လာလျှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ဘုရားရှိခိုးပြီးတော့ ပူဇော်လိုက်ဦးမှ’၊ ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်း ပွားများချင်စိတ်၊ တရား အားထုတ်ချင်စိတ် ပေါက်လာလြှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ပွားများဖြစ်အောင် ပွားများလိုက်ဦးမှ၊အားထုတ်ဖြစ်အောင် အားထုတ်လိုက်ဦးမှ’ စသည်ဖြင့် ကောင်းကံကောင်းခြင်းများ
အထမြောက်အောင်မြင်စေရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ် သည်။ ကောင်းစိတ်ျမားပေါ်လာပြီး ကောင်းကျံမားကိုပြုလုပ် အားထုတ်ဖြစ် လြှင် အခွင့်အေရးကောင်း၊ အခြေအနေကောင်းများ ရလာပြီဟု မှတ်ယူရ မည်ဖြစ်
ပြီး ၎င်းအခွင့်ကောင်း၊ အခြေအနေကောင်းများကို လက်မလွတ်စေ ရန် လွန်စွာ အေရးကြီးပါသည် …။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အပေါင်း
ကျန်းမာရွှင်လန်း ငြိမ်းအေးနိုင်ကြ ပါစေ ~~ နှလုံးသား၏ ဓမ္မသံစဉ်
လူတဈယော ကျသညျ ကံကောငျး ခငျြလာပွီဆိုလွှငျ စိတျတညျ ငွိမျလာခွငျး၊ စိတျရှုပျထှေးမှု ကငျးကာ စိတျမြားကွညျလငျလနျးဆနျးလာခွငျးစသော လက်ခဏာမြား ဖွဈပျေါလာလရှေိ့ပါသညျ …။၎င်းငျးစိတျကို ယဘေုယအွားဖွငျ့ ကောငျးစိတျဟု သတျမှတျနိုငျပါသညျ …။
ထိုစိတျမြိုး ဝငျလာလွှငျ ‘ငါတော့ ကံကောငျးတော့မယျ၊ ဒီစိတျဟာ ကောငျး ကံပွုလုပျဖွဈဖို့ အကွောငျးခံစိတျပပေဲ’ ဟု သဘောထားကာ ထို စိတျကို ပြောကျပကျြမသှားရအောငျ ထိနျးထားပွီး ကောငျးမှုတဈခုခုကိုပွုလုပျဖွဈအောငျသာ ကွိုးစားလုပျဆောငျယူရမညျ ဖွဈသညျ …။
ထို့အပွငျ အမြားဆုံး ပွုလုပျဖွဈလေ့ ရှိသညျ့ လကေ့ငျြ့နစေရာ အထူး မလိုသော သမားရိုးကွ မကောငျးကံဘကျသို့ ပွနျပွောငျး နောကျကွောငျးပွနျမလှညျ့မိစရေနျလညျး အထူးသတိထားရနျ လိုအပျပါသညျ။
လှူခငျြတနျးခငျြစိတျပေါကျလာလြှငျ ‘ငါ ကံကောငျးလာပွီ၊ ဒီကံလေး အထမွောကျအောငျ ငါ လှူပေးဦးမှ’၊ သီလဆောကျတညျခငျြစိတျ ပေါကျ လာလြှငျ ‘ငါ ကံကောငျး လာပွီ၊ သီလလေး ဆောကျတညျပွီး နဦေးမှ’၊
ဘုရားရှိခိုးခငျြစိတျ ပေါကျလာလြှငျ ‘ငါ ကံကောငျးလာပွီ၊ ဘုရားရှိခိုးပွီးတော့ ပူဇျောလိုကျဦးမှ’၊ ဘာဝနာကမ်မဋ်ဌာနျး ပှားမြားခငျြစိတျ၊ တရား အားထုတျခငျြစိတျ ပေါကျလာလွှငျ ‘ငါ ကံကောငျးလာပွီ၊ ပှားမြားဖွဈအောငျ ပှားမြားလိုကျဦးမှ၊အားထုတျဖွဈအောငျ အားထုတျလိုကျဦးမှ’ စသညျဖွငျ့ ကောငျးကံကောငျးခွငျးမြား
အထမွောကျအောငျမွငျစရေနျ ကွိုးစားလုပျဆောငျရမညျ ဖွဈ သညျ။ ကောငျးစိတျမြားပျေါလာပွီး ကောငျးကံမြားကိုပွုလုပျ အားထုတျဖွဈ လွှငျ အခှငျ့အရေးကောငျး၊ အခွအေနကေောငျးမြား ရလာပွီဟု မှတျယူရ မညျဖွဈ
ပွီး ၎င်းငျးအခှငျ့ကောငျး၊ အခွအေနကေောငျးမြားကို လကျမလှတျစေ ရနျ လှနျစှာ အရေးကွီးပါသညျ …။ ဓမ်မမိတျဆှေ သူတျောစငျအပေါငျး
ကနျြးမာရှငျလနျး ငွိမျးအေးနိုငျကွ ပါစေ ~~ နှလုံးသား၏ ဓမ်မသံစဉျ
အိမ်ကို ကွန်ကရစ် နဲ့ ဆောက်ရင်ကောင်းမလားး သံနဲ့ဆောက်ရင် ကောင်းမလား ခဏ ခဏ မေးခံရတဲ့ မေးခွန်းပါ ။
သူတို့ရဲ့ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကတော့ အသီးသီးရှိပါတယ်။ သေချာဖတ်ပြီး ရွေးချယ်ပေါ့ ။
၂။ Steel structuresတွေရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိတွေက uniform ဖြစ်ပါတယ်။ တသားတည်းဖြစ်ပြီးတော့ ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်မှု ပိုမိုမြင့်မားတယ်။
၃။High ductility ဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပြိုကျ/ပျက်စီးတော့မဲ့ အခြေအနေတွေကို ကြိုတင်ပြီး လုံလောက်တဲ့ သတိပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
၄။ လွယ်လွယ်ကူကူ ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
၅။ Steel structureတွေဟာ concrete structure နဲ့ စာရင်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ လွယ်လွယ်ကူကူ လျင်လျင်မြန်မြန်တည်ဆောက်နိုင်ပါတယ်။
၆။ Steel structure တည်ဆောက်ရာမှာ အခြားတည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းတွေကို အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ရာသီဥတုကြောင့်ဖြစ်လာမဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မူတွေ နည်းနိုင်ပါတယ်။
၇။ နဂိုကတည်းက ရှိနေတဲ့ Steel structure ကို ထပ်ပြီး တိုးချဲ့ဖို့ လွယ်ကူပါတယ်။
၈။ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းထားတဲ့ Steel frameတွေဟာ အကန့်အသတ်မရှိ သက်တမ်းရှည်ကြာနိုင်ပါတယ်။
၁။ သံချေးတက်ပြီး ထိခိုက်လွယ်တဲ့ အတွက်ကြောင့်သံချေးမတက်ဖို့ zic-rich paint နဲ့ ထပ်ပြီး ကာကွယ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အခြား structural materials တွေနဲ့စာရင်ပြင်ဆင်ထိန်း သိမ်းစရိတ်ပို မိုကုန်ကျ နိုင်ပါတယ်။ Corrosion-resistance steelတွေကိုလည်းဘဲ သုံးဖို့လိုအပ်ပါဦးမယ်။
၃။ထပ်ခါထပ်ခါသက်ရောက်နေတဲ့ ဝန်အားတွေကြောင့်faituage ဖြစ်တာတွေ၊ Stress concentrationတွေပါဝင်လာတဲ့အခါ structural detailsပေါ်
မူတည်ပြီး structural steelတွေဟာ ကျိုးလွယ်ပဲ့လွယ်ထိခိုက်လွယ်ပါတယ်။
၄။ ပိုမိုသွယ်လျတဲ့ Compression memberတွေ ပိုလာရင်ဖိအားကြောင့်တွန့်ကြေပျက်စီးမှုအန္တရာယ်ပိုများလာမှာပါ။
တခါတရံမှာတော့ memberတွေ ပိုမိုတောင့်တင်းဖို့အတွက်ထပ်လောင်း ထည့်ပေးရတာ ရှိလာတဲ့အခါ structure ဟာ ပုံမှန်အနေအထားမှာ ရှိမနေတာတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။
၂။ မီးလောင်ဒဏ်ကို Steel ထက်ပိုပြီး ခံနိုင်တယ်။
၃။ ပြင်ဆင်စရိတ်နည်းနည်းနဲ့ သက်တမ်းတာရှည်ခံနိုင်တယ်။
၅။ Precast Structural Componentsတွေလို လိုချင်တဲ့ ပုံစံကို သွန်းလောင်းနိုင်တယ်။ Deflection ဖြစ်ပေါ်မှုနည်းနည်းနဲ့ Rigid memberတွေ တည်ဆောက်နိုင်တယ်။
၂။နောက်ဆုံးလိုချင်တဲ့ Strength ရရှိဖို့အတွက်ဖျော်စပ်ရတာတွေ (Mixing)၊ သွန်းလောင်းရတာတွေ(casting) နဲ့ curing (အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်းရတာတွေ) စတာတွေ လိုအပ်ပါတယ်။
၃။ ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းဖို့အတွက်ဆင်ရတဲ့ formworksတွေရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က မြင့်မားပါတယ်။
formworks အတွက်လိုအပ်တဲ့ ပစ္စည်းတွေနဲ့ လုပ်သားပညာရှင်ခတွေက သွန်းလောင်းရတဲ့ ကွန်ကရစ်ရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်နီးပါးရှိပါတယ်။
၄။ Steel နဲ့ စာရင်Compressive strength ပိုနည်းပါတယ်။ ( materialsပေါ်မူတည်ပြီးတော့ 1:10 ခန့်ရှိပါတယ်)။
အဲဒီအတွက်ကြောင့်အထပ်မြင့်အဆောက်အဦတွေရဲ့ Columnတွေဟာ ကြီးမားတဲ့ Sectionတွေဖြစ်လာပါတယ်။
၅။ Live loads သက်ရောက်မှုတွေနဲ့ Shrinkageတွေကြောင့်concrete မှာ cracksတွေပေါ်လာပါတယ် Credit;
၁။ သံခြေးတကျပွီး ထိခိုကျလှယျတဲ့ အတှကျကွောငျ့သံခြေးမတကျဖို့ zic-rich paint နဲ့ ထပျပွီး ကာကှယျထားဖို့လိုအပျပါတယျ။
အခွား structural materials တှနေဲ့စာရငျပွငျဆငျထိနျး သိမျးစရိတျပို မိုကုနျကြ နိုငျပါတယျ။ Corrosion-resistance steelတှကေိုလညျးဘဲ သုံးဖို့လိုအပျပါဦးမယျ။
၃။ထပျခါထပျခါသကျရောကျနတေဲ့ ဝနျအားတှကွေောငျ့faituage ဖွဈတာတှေ၊ Stress concentrationတှပေါဝငျလာတဲ့အခါ structural detailsပျေါ
မူတညျပွီး structural steelတှဟော ကြိုးလှယျပဲ့လှယျထိခိုကျလှယျပါတယျ။
၄။ ပိုမိုသှယျလတြဲ့ Compression memberတှေ ပိုလာရငျဖိအားကွောငျ့တှနျ့ကွပေကျြစီးမှုအန်တရာယျပိုမြားလာမှာပါ။
တခါတရံမှာတော့ memberတှေ ပိုမိုတောငျ့တငျးဖို့အတှကျထပျလောငျး ထညျ့ပေးရတာ ရှိလာတဲ့အခါ structure ဟာ ပုံမှနျအနအေထားမှာ ရှိမနတောတှေ ဖွဈလာပါတော့တယျ။
၃။ ကှနျကရဈသှနျးလောငျးဖို့အတှကျဆငျရတဲ့ formworksတှရေဲ့ ကုနျကစြရိတျက မွငျ့မားပါတယျ။
formworks အတှကျလိုအပျတဲ့ ပစ်စညျးတှနေဲ့ လုပျသားပညာရှငျခတှကေ သှနျးလောငျးရတဲ့ ကှနျကရဈရဲ့ ကုနျကစြရိတျနီးပါးရှိပါတယျ။
၄။ Steel နဲ့ စာရငျCompressive strength ပိုနညျးပါတယျ။ ( materialsပျေါမူတညျပွီးတော့ 1:10 ခနျ့ရှိပါတယျ)။
အဲဒီအတှကျကွောငျ့အထပျမွငျ့အဆောကျအဦတှရေဲ့ Columnတှဟော ကွီးမားတဲ့ Sectionတှဖွေဈလာပါတယျ။
မိဘတှရေဲ့ကြေးဇူးကို အမှတျရနအေောငျ စိုကျခငျးထဲမှာ ဘှဲ့ရဓါတျပုံရိုကျခဲ့တဲ့ မိနျးကလေး
မိဘတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကလေးတွေကို တိုးတက်စေချင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ပညာရေးမှာ ငွေကြေးအကုန်အကျ ခံပြီးတော့ သင်ပေးကြပါတယ်။ တချို့မိဘတွေဆိုရင် ကလေးတွေကို စကားနဲ့ပြောဆို ဆုံးမနေတာထက် သူတို့ကိုယ်တိုင် အတွေ့အကြုံရအောင် လုပ်ငန်းခွင်ထဲကို လက်တွေ့ဆင်းခိုင်းလေ့ ရှိပါတယ်။မက္ကဆီကိုကနေ အမေရိကန်ကို ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်တဲ့ မိသားစု တစ်စုဟာလည်း သူတို့ရဲ့သမီးကို ကြိုးစားခြင်းနဲ့ ဇွဲရှိမှုတို့ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အကြောင်းတွေကို သင်ပေးခဲ့ပါတ
ယ်။ အခုအချိန်မှာဆိုရင် သူတို့ရဲ့သမီးဟာ ဘွဲ့ရပြီးတော့ မိဘတွေဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့ပါပြီ။Jennifer Rocha လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးရဲ့ မိဘတွေဟာ မက္ကဆီကိုကနေ အမေရိကန်ကို ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ သူမကို ကောလိပ်တက်ခိုင်းဖို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ထားခဲ့ပေမယ့် တက်ဖို့အတွက် အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့် မိဘတွေက ရွှေ့ပြောင်းတောင်သူတွေ လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။Jennifer ဟာ စာသင်ချိန်တွေ ပြီးတဲ့အခါမှာ အိမ်ကို အပြေးအလွှား ပြန်လြာ
ပီးတော့ သူ့မိဘတွေရဲ့ အလုပ်ကို လုပ်ကူပေးခဲ့ရပါတယ်။ သူမ မိဘတွေရဲ့ အလုပ်ဟာ ညတော်တော်နက်တဲ့အထိ မပြီးပါဘူး။ ၂-၃ နာရီလောက် ခဏလေး အိပ်ပြီးတာနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် ပြန်ဝင်ရပါတယ်။ အလုပ်အရမ်း လုပ်ရတာနဲ့ အိပ်ရေးမဝတာတင် မကပါဘူး။ အလုပ်ကြိုးစားတဲ့သူတွေရဲ့ စိတ်ဓာတ်ကို ပိုပြီး လေးစားလာမိတယ်လို့ Jennifer က ပြောပါတယ်။လူတွေဟာ ကုန်စုံဆိုင်တွေ၊ စတိုးဆိုင်တွေမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ ဝယ်လို့ ရပေမယ့် ဒါတွေကို
စိုက်ပျိုးတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်ထိ ပင်ပန်းခဲ့လဲဆိုတာ ကိုတော့ တွေးဖို့မေ့နေပါတယ်။ သစ်သီးတွေနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်လိုမျိုး အရာတွေကို စိုက်ပျိုးဖို့အတွက် စိုက်ပျိုးရေးသမားတွေက ရာသီဥတုဒဏ်တွေ၊ ပိုးမွှားတွေရဲ့ ဖျက်စီးတာတွေ၊ ကျောရိုးနာကျင်မှုတွေ စတဲ့ ဒုက္ခမျိုးစုံကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် ကျန်းမာရေး မကောင်းတာတောင် စိုက်ခင်းထဲဆင်းပြီး အလုပ် လုပ်ရတဲ့သူတွေလည်း ရှိပါသေးတယ်။Jennifer ဟာ ကောလိပ်တက်နေတဲ့ အချိန်အတွင်းမှာ အဆောင်မေ
နနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ကောလိပ်နဲ့အိမ်ကို နေ့တိုင်း အသွားအပြန် လုပ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူမရဲ့ စာလေ့လာမှု အချိန်တွေ၊ ကျောင်းတက်ရတဲ့ အချိန်တွေ၊ မိဘတွေကို လုပ်ကူပေးရတဲ့ အချိန်တွေ၊ ကောလိပ်နဲ့ အိမ်ကြားက အသွားအပြန်ကြာချိန်တွေကို တစ်နေ့တာအတွင်း လုံလောက်အောင် ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။ “အရမ်းအရမ်းကို ပင်ပန်းတာကြောင့် လက်လျှော့ခဲ့ချင်ပေမယ့်လည်း မိဘတွေ၊ သူတို့ရဲ့ အိမ်မက်တွေ၊ အားပေးမှုတွေကြောင့် လက်မလျှော့ပဲ ဆက်ကြိုးစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်” လို့ သူမက
ပာပါတယ်။ခက်ခက်ခဲခဲ ဘွဲ့ရအောင်ထားပေးခဲ့တဲ့ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးတွေကို မမေ့မလျော့အောင် ဘွဲ့ရပုံတွေကို စိုက်ခင်းထဲမှာပဲ သဘာဝကျကျ ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။ ဘွဲ့ရပုံတွေဟာ မိဘတွေကို လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ပုံတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ အခုဆိုရင် ဘွဲ့ရပြီးတော့ ခိုင်မာတဲ့ ခြေလှမ်းတွေကို စတင်နေပါပြီ။Zombie (Lovemedia)
ထိုငျး မွနျမာနယျစပျမှာ အလှူအတနျးတှနေတေို့ငျးနီးပါးပွုလုပျပေးနတေဲ့ Lane Terzieff
အမေရိကန်နိုင်ငံသား အဆိုတော်၊ ပရိုဂျူဆာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Lane Terzieff ဟာဆိုရင် မြန်မာပြည်ရဲ့ ခက်ခဲနေတဲ့ကာလတွေမှာ အမြဲတမ်းလိုလိုပြည်သူတွေနဲ့ တစ်သားတည်း ရှိပေးခဲ့တဲ့သူပါ။ အခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်း မြန်မာ၊ ထိုင်းနယ်စပ်မှာ နေ့တိုင်းလိုလို အလှူအတန်းတွေ ပြုပေးနေတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။Lane
Terzieff ဟာ မြန်မာပြည်ကို ချစ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ အမြဲတမ်းတစ်သားတည်း ဖြစ်အောင်နေတတ်တဲ့သူပါ။ တိုင်းပြည်အခြေအနေတွေ မကောင်းတဲ့ အချိန်မှာတောင် သူ့နိုင်ငံကိုမပြန်သွားဘဲ မြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အတူတူ ဆက်လက်ပြီး ရပ်တည်ပေးခဲ့တာကို သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ယက်စာမျက်နှာမှာ တင်ထား
တဲ့အကြောင်းအရာ တွေက သက်သေပြပေးနေပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာလည်း သူ့ရဲ့လူမှုစာမျက်နှာမှာ အလှူအတန်းပြုနေတဲ့ ပုံလေးကိုတင်ပေးထားပါတယ်။ Lane Terzieff အလှူအတန်း ပြုလုပ်နေတဲ့ပုံလေးတွေကို တစ်ခါတည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ လေးစားဝမ်းမြောက်စွာဖြင့် ခရက်ဒစ်.
အမရေိကနျနိုငျငံသား အဆိုတျော၊ ပရိုဂြူဆာတဈယောကျဖွဈတဲ့ Lane Terzieff ဟာဆိုရငျ မွနျမာပွညျရဲ့ ခကျခဲနတေဲ့ကာလတှမှော အမွဲတမျးလိုလိုပွညျသူတှနေဲ့ တဈသားတညျး ရှိပေးခဲ့တဲ့သူပါ။ အခုလကျရှိအခြိနျထိလညျး မွနျမာ၊ ထိုငျးနယျစပျမှာ နတေို့ငျးလိုလို အလှူအတနျးတှေ ပွုပေးနတေဲ့သူဖွဈပါတယျ။
Lane Terzieff ဟာ မွနျမာပွညျကို ခဈြတဲ့သူတဈယောကျဖွဈပွီး မွနျမာ့ယဉျကြေးမှုနဲ့ အမွဲတမျးတဈသားတညျး ဖွဈအောငျနတေတျတဲ့သူပါ။ တိုငျးပွညျအခွအေနတှေေ မကောငျးတဲ့ အခြိနျမှာတောငျ သူ့နိုငျငံကိုမပွနျသှားဘဲ မွနျမာလူမြိုးတှနေဲ့အတူတူ ဆကျလကျပွီး ရပျတညျပေးခဲ့တာကို သူ့ရဲ့လူမှုကှနျယကျ
စာမကျြနှာမှာ တငျထားတဲ့အကွောငျးအရာ တှကေ သကျသပွေပေးနပေါတယျ။ ဒီကနမှေ့ာလညျး သူ့ရဲ့လူမှုစာမကျြနှာမှာ အလှူအတနျးပွုနတေဲ့ ပုံလေးကိုတငျပေးထားပါတယျ။ Lane Terzieff အလှူအတနျး ပွုလုပျနတေဲ့ပုံလေးတှကေိုတဈခါတညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော။ လေးစားဝမျးမွောကျစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ.
သှေးတိုးရှိတယျဆိုရငျ ဒီဆေးနညျးလေးတှေ မှတျထားပါ
၁။ ရှောက်သီးအခွံပါ ၄ စိတ် စိတ်ပြီး မတ်ခွက်တွင်ထည့် ရေနွေးစိမ်ထားပြီး အအေးခံ၍ တစ်နေကုန်သောက်ပါ။
၂။ ရှောက်သီးအရည်ညှစ် ၃ ဇွန်း+ပျားရည်စစ်စစ် ၁ဇွန်း ထမင်းစားပြီးသောက်လိုက်ပါ။
၃။ ရှောက်ရွက်အနု၊ အရင့် တစ်နေ့လျှင် ရ ရွက်မှ ၁၀ ရွက်ခန့် နေ့စဉ်အတို့အမြှုပ် ပြုလုပ်၍စားပါ။
၄။ ငါးပိရည်၊ ငံပြာရည်၊ ငါးခြောက်စသည်တို့သည် မြန်မာလူမျိုးတို့နှင့် မကင်းနိုင်သော အစာများ ဖြစ်သည်။ ထိုအစာများ စားသည့်နေ့တွင် ဒန့်သလွန်ရွက် ဟင်းချိုကို ကြက်သွန်ဖြူနိုင်နိုင်ဖြင့် ချက်ပြီး တွဲဖက်သောက်ပေးပါ။ကြက်သွန်ဖြူသည် သွေးတိုးကို ကျစေနိုင်သည်။ (သွေးတိုးရောဂါ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ ကြက်သွန်ဖြူကို နေ့စဉ်
၅။ ဒန့်သလွန်သီးအရင့်များကို နေဖြင့် အခြောက်လှန်းထားပြီး သွေးအလွန်တိုးလျှင် ၂ စေ့၊ ၃ စေ့ ဝါးစားလိုက်ပါ။
၇။ ကြက်သွန်နီကို ထက်ခြမ်း ခြမ်း ရေတစ်ဖန်ခွက်တွင် စိမ်၍ နံနက်အိပ်ယာထစောစော သောက်ပေးလျှင် သွေးတိုးရောဂါကို ကာကွယ်သည်။နံနက်အိပ်ယာထချိန်
၁၀။ သွေးတိုးရောဂါခံစားနေရပါက ဆေးဝိဇ္ဇာ အာရုံကြောဆေးကို အစာစားပြီး ၅ပြား တနေ့ ၃ကြိမ် ရှောက်ရည် (သို့)ရေနွေးဖြင့်သောက်ပေးပါ။
၁။ ရှောကျသီးအခှံပါ ၄ စိတျ စိတျပွီး မတျခှကျတှငျထညျ့ ရနှေေးစိမျထားပွီး အအေးခံ၍ တဈနကေုနျသောကျပါ။
၂။ ရှောကျသီးအရညျညှဈ ၃ ဇှနျး+ပြားရညျစဈစဈ ၁ဇှနျး ထမငျးစားပွီးသောကျလိုကျပါ။
၃။ ရှောကျရှကျအနု၊ အရငျ့ တဈနလြေှ့ငျ ရ ရှကျမှ ၁၀ ရှကျခနျ့ နစေ့ဉျအတို့အမွှုပျ ပွုလုပျ၍စားပါ။
၄။ ငါးပိရညျ၊ ငံပွာရညျ၊ ငါးခွောကျစသညျတို့သညျ မွနျမာလူမြိုးတို့နှငျ့ မကငျးနိုငျသော အစာမြား ဖွဈသညျ။ ထိုအစာမြား စားသညျ့နတှေ့ငျ ဒနျ့သလှနျရှကျ ဟငျးခြိုကို ကွကျသှနျဖွူနိုငျနိုငျဖွငျ့ ခကျြပွီး တှဲဖကျသောကျပေးပါ။ကွကျသှနျဖွူသညျ သှေးတိုးကို ကစြနေိုငျသညျ။ (သှေးတိုးရောဂါ ဖွဈပှားခဲ့ရာ ကွကျသှနျဖွူကို
၅။ ဒနျ့သလှနျသီးအရငျ့မြားကို နဖွေငျ့ အခွောကျလှနျးထားပွီး သှေးအလှနျတိုးလြှငျ ၂ စေ့၊ ၃ စေ့ ဝါးစားလိုကျပါ။
၆။ သင်ျဘောအဖိုပငျ၏ အပှငျ့ကို ပွုတျ၍ စားပါက သှေးတိုးရောဂါ သကျသာစသေညျ။
၇။ ကွကျသှနျနီကို ထကျခွမျး ခွမျး ရတေဈဖနျခှကျတှငျ စိမျ၍ နံနကျအိပျယာထစောစော သောကျပေးလြှငျ သှေးတိုးရောဂါကို ကာကှယျသညျ။နံနကျအိပျ
ယာထခြိနျ ခေါငျးကိုကျခွငျးကို သကျသာစသေညျ။
၉။ ခငျြးလကျနှဈဆဈကို ထုထောငျးအရညျကိုယူ သံပရာသီးတဈလုံးအရညျနှငျ့ ပြားရညျတဈဇှနျးစပျ နစေ့ဉျသောကျပါ။ သှေးတိုးရောဂါဘေး ကငျးဝေး
နိုငျသညျ။၁၀။ သှေးတိုးရောဂါခံစားနရေပါက ဆေးဝိဇ်ဇာ အာရုံကွောဆေးကို အစာစားပွီး ၅ပွား တနေ့ ၃ကွိမျ ရှောကျရညျ (သို့)ရနှေေးဖွငျ့သောကျပေးပါ။
စိတျညဈနရေငျ ဒီ ၃ ခု လုပျပါ
စိတ်ညစ်ပြီ၊ စိတ်တွေ ဖိစီးနေပြီဆို ဘာလုပ်လေ့ ရှိကြသလဲ။ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တော့ တူမယ် မထင်ဘူး။ တချို့လည်း အရက်သောက်မယ်။ တချို့လည်း ကာရာအိုကေ ဆိုမယ်။ တချို့လည်း ဝယ်ချင်တာတွေ လျှောက်ဝယ်ပစ်မယ်ပေါ့။ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ငွေကုန်ကြေးကျလည်း မများဘဲ ကိုယ့်ရဲ့ ညစ်နေတဲ့ စိတ်ကို အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ပြေပျောက်သွားစေမဲ့ အလုပ် ၃ ခုအကြောင်း ဝေမျှပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ရသစာပေ ဖတ်ပါ။
ရသစာပေ ဆိုတာ အမျိုးမျိုး ရှိပေမဲ့ အဓိကက ဝတ္ထုစာအုပ်ကောင်းတွေ ဖတ်စေချင်တာပါ။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ ဆိုတာ အားလုံးလည်း သိတဲ့အတိုင်း ၁၀၀ မှာ ၉၉ ယောက်က ကောင်းတာတွေပဲ တင်ကြတာပါ။ တစ်ဖက်ကလည်း အားကျစရာ ဆိုပေမဲ့ ကြာလာတော့ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် သိမ်ငယ်လာတယ်။ ကိုယ့်ဘဝတစ်ခုပဲ စိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေသလို ဖြစ်လာတယ်။ရသစာပေကျ ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ ဘဝတွေကို အရှိအရှိအတိုင်း ချပြထားတယ်။ ကောင်းတာလည်း ပါတယ်။
ဆိုးတာလည်း ပါတယ်။ ရာနှုန်းပြည့် ကောင်းနေတယ် ဆိုတဲ့သူလည်း မရှိဘူး။ ဒီတော့ ဘဝအပေါ်မှာ မြင်တဲ့အမြင်တွေ ပြောင်းလာမယ်။ လူတွေအပေါ် ပိုပြီး နားလည်ပေးနိုင်လာမယ်။ စိတ်အေးချမ်းမယ်။နောက်ပြီး ကြည်နူးမှုရသကလေးတွေလည်း ခံစားရမယ်။ ဇာတ်နာတဲ့ ဝတ္ထုတွေ ဖတ်လို့ ပိုစိတ်ညစ်သွားမလား စိုးရိမ်ကြပေမဲ့ ကျွန်တော့်အတွေ့အကြုံအရတော့ အဲ့လို စာအုပ်ကလေး ဖတ်ရင်း ကိုယ်မသိတဲ့ ဘဝတွေအကြောင်းကို စိတ်ကူးထဲ ပုံဖော်ခံစားနေရတာ သိပ်ကောင်းပါ
တယ်။ ဖတ်လည်းပြီးရော ကိုယ်ဖြစ်နေတဲ့ စိတ်ညစ်တာတွေလည်း အတော်လေး သက်သာသွားတယ်။ ကိုယ်အမြင်မကြည် ဖြစ်နေတာတွေကိုပါ ရှုထောင့်တစ်မျိုးကနေ ကြည့်တတ်လာတယ်။ ခွင့်လွှတ်ပေးတတ်လာတယ်။ဒါက တကယ်တော့ စိတ်ညစ်မှ လုပ်ရမှာမျိုး မဟုတ်ပါဘူး။ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်လို့ ခံယူချက်တွေ မှန်ချင်ရင်၊ ကိုယ့်ရဲ့ စိတ်နှလုံး နူးညံ့ချင်ရင်၊ ကိုယ်ချင်းစာတတ်ချင်ရင်၊ ပျော်ရွှင်ချင်တယ်ဆိုရင် ဖတ်ကိုဖတ်သင့်တဲ့ စာအုပ်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ချရေးကြည့်ပါ။
ဒီအတိုင်း စိတ်ထဲ တွေးရုံတင် မတွေးပါနဲ့။ စာအုပ်ထဲမှာ ချရေးပါ။ ကျွန်တော် စိတ်ညစ်တိုင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အားမရတိုင်း လုပ်လေ့ရှိတဲ့ အပြုအမူ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမတစ်ခါ ရေးထားတာကို ပြန်ကြည့်ရင် စိတ်ညစ်မပျောက်ပါဘူး။ အသစ်ထပ်ရေးမှ အဆင်ပြေတာပါ။ ဒါကြောင့် စိတ်ညစ်တိုင်း ချရေးပါ။ တစ်ခါနဲ့တစ်ခါလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမြင်ချင်းက မတူနိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့ဟာ လူ့သဘာဝပဲ ပြောရမလား။ ကိုယ့်မှာ ရှိတဲ့အရာတွေကိုပဲ အသိအမှတ် မပြုတတ်ဘဲ မရှိတဲ့
အရာကိုမှ သိမ်ငယ်တတ်ကြတယ်။ နောက်ပြီး ငယ်ငယ်ကလေးကတည်းက သူများနဲ့ နှိုင်းယှဉ်တာ ခံခဲ့ရတယ်။ စာမေးပွဲမှာဆိုလည်း အဆင့်တွေခွဲတယ်။ အတန်းတွေခွဲတယ်။ နင်က ဘယ်သူ့သားလောက်တောင် အသုံးမကျဘူး၊ ဘယ်သူတွေဆို ဘယ်အရွယ်နဲ့ ဘာဖြစ်နေပြီ စသဖြင့်သူများနဲ့ အမြဲနှိုင်းခံရလေ့ ရှိတယ်။ ပညာရေးစနစ်ကလည်း ဒီလိုပဲ။ မိဘတွေရဲ့ ပြုစုပျိုးထောင်မှုကလည်း ဒီလိုပဲ။ နောက်ဆုံး ကိုယ့်ညီအစ်ကို မောင်နှမချင်းတောင် နှိုင်းယှဉ်ခံရတယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အားသာ
ချက်ထက် ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုပဲ ဖိပြီး ဆူပူခံရတယ်။ ဒါကြောင့် ထင်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ဆို သိပ်လျှော့တွက်ကြတယ်။ ရလဒ်အနေနဲ့ အလွယ်တကူ စိတ်ဓါတ်ကျတယ်။ ဘဝကို အားမရတော့ဘူး။ဒါကြောင့် အဲ့လိုများ ခံစားနေရတယ်ဆို ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေ ချရေးကြည့်ပါ။
ပိုကောင်းတာက မရေးခင် အရင်ဆုံး ၁၀ မိနစ်လောက် တရားထိုင်ပြီး ဝင်လေထွက်လေ မှတ်လိုက်ပါ။ ဒါဆို စိတ်က ပိုရှင်းသွားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အမှန်မြင်လာပါလိမ့်မယ်။ဥပမာကလေးတွေ ရေးပြပါမယ်။
၁) ကျန်းမာရေး ကောင်းတယ်။ (အဲဒါ ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး ထင်ရင် နီးစပ်ရာဆေးရုံတစ်ခုကို သွားကြည့်လိုက်ပါ။ ကျန်းမာရေးရဲ့ တန်ဖိုးကို မြင်သွားလိမ့်မယ်။၂) သက်ရှိထင်ရှား မိဘတွေ ရှိသေးတယ်။ သူတို့ကို လုပ်ကျွေးခွင့် ရနေတယ်။၃) လူအများကို ကူညီတတ်တယ်။ ငွေကြေးမချမ်းသာပေမဲ့ ကိုယ်ဟာ ကိုယ်နဲ့ ပတ်
သက်ဆက်စပ်သူတိုင်းကို ကူညီပေးတယ်။ စိတ်ချမ်းသာအောင် ထားတတ်တယ်။ကိုယ့်ကြောင့် ဘယ်သူမှ မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ် မကျဖူးဘူး။
အစရှိသဖြင့် အဲဒီလို ကောင်းတာလေးတွေ ချရေးပါ။ ပြီးရင် ပြန်ဖတ်ပါ။ မျက်စိကလေး မှိတ်ပြီး ရေးထားတာတွေကို ပုံဖော်ခံစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သိမ်ငယ်နေတာတွေ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ ပြေပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်။
၃။ ချစ်ခင်ရသူတွေနဲ့ ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့ Activity တွေ လုပ်ပါ။သူငယ်ချင်းတွေ စုပြီး ဘားသွားထိုင်ကြမယ်၊ ကလပ်တက်ကြမယ်၊ ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။ Free but fun ငွေမကုန်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ အကုန်အကျ နည်းမယ်၊ ပျော်စရာလည်း ကောင်းမယ် ဆိုတဲ့ ပုံစံလေးနဲ့ တွေ့ကြပါ။ ဥပမာ အိမ်မှာ စုပြီး မုန့်တစ်ခုခု လုပ်စားကြတာတို့၊ နေ့ချင်းပြန် ခရီးတိုလေး ထွက်၊ ပျော်ပွဲစားထွက်၊ သူက ဘာယူ၊ ငါက ဘာဝယ်ခဲ့မယ် ဆိုတာမျိုး၊ မြို့တွင်းမှာပဲ အထင်
ကရနေရာ၊ သိပ်လည်း မရောက်ဖြစ်တဲ့နေရာမျိုးမှာ ဓါတ်ပုံသွားရိုက်ကြတာမျိုး၊ လေ့လာရေး လုပ်ကြတာမျိုး (ဥပမာ ရန်ကုန်မှာဆို ဝန်ကြီးများရုံးလိုပေါ့)အဲ့လိုလေးတွေ လုပ်ခြင်းကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ပိုပြီး ရင်းနှီးစေသလို ပိုလည်း ပျော်ရွှင်စေပါလိမ့်မယ်။ အချိန်အများစုမှာ ဆိုရှယ်မီဒီယာရယ်၊ ငွေကုန်ကြေးကျ များတဲ့ နေရာတွေ သွားလည်ပတ် စားသောက်ကြတာရယ်ပဲ လုပ်နေကြတဲ့ခေတ်မှာ ဒါလေးတွေက ကိုယ့်စိတ်ကို လန်းဆန်းစေပါလိမ့်မယ်။
အခု ပြောခဲ့တဲ့ ၃ ချက်စလုံးက ပိုက်ဆံလည်း မကုန်သလို၊ လူလည်း မပင်ပန်းဘူး။ အရက်သောက်သလိုမျိုး ခဏတော့ ပျော်ရပေမဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာတွေ လိုက်လာနိုင်တဲ့ ကိစ္စမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီတော့ စိတ်ညစ်ရင် စမ်းလုပ်ကြည့်ပါ။ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။
၁။ ရသစာပေ ဖတ်ကျင့်မရှိရင် ဒီနေ့ကစပြီး ဖတ်ကြည့်ပါ။ လူအများ ညွှန်းတဲ့စာအုပ်တွေကနေ အရင်စဖတ်ကြည့်ပါ။
၂။ ကိုယ့်ဘဝရဲ့ ကောင်းတဲ့အချက်တွေကို ချရေးဖို့ အရင်ဆုံး တရားထိုင်ပါ။ ပြီးမှ ရေးပါ။ အဲဒါတွေကို မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ပြန်ပုံဖော်ကြည့်ပါ။
၃။ မိသားစုနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ သူငယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်နဲ့ စိတ်ချင်းရင်းနှီးတဲ့သူတွေနဲ့ ငွေလည်း သိပ်မကုန်၊ လုပ်လေ့လည်း သိပ်မရှိ၊ ပျော်စရာလည်း ကောင်းတဲ့ အလုပ်ကလေးတွေ လုပ်ကြည့်ပါ။Ref: The Key To Happiness : Meik Wiking